Mpanamboatra sy mpamatsy vovony tsara Mpanamboatra mpanamboatra banffe
Banffee Makeup - Mpanamboatra Label Makinger Professional Making& Orinasa mpanao kosmetika
Momba an'i Banffee
OEM / odm dingana
Vokatra makiazy maso
Non stick molotra gloss
Ny vokatra makeup
an-trano > Products > Ny vokatra makeup > Vovoka mifangaro
Loko 3:Killfevovoka mifangaro manana loko 3 avy amin'ny loko matevina amin'ny loko lalina. Ny loko fotsy sy fotsy, ny loko maizina dia mifanaraka amin'ny karazana hoditra rehetra. TsaraNy vovony maharitra maharitra Amidy, raiso tsara ny hifandray aminay.
Vovony:izany's karazana tsara sy malefaka matte. Izy io dia manana fampisehoana tsara amin'ny fifehezana ny solika sy ny rano. Super avo be dia be, hanarona ny tarehy tanteraka ny tarehy ho pimples, pores, somary somary kely, ary ny sisa. Izy io dia manana fiasa mitovy amin'ny fototry ny fototry ny vovony. Mora ny manao tarehy tsy misy dikany.
Package:Ny vovony dia ao anaty paleta mainty. Ny ivelany dia boaty taratasy mainty misy horonantsary plastika misy tombo-kase.
Lanja: Net lanja 10G, lanja lehibe 70g.
Ban Korean Koreana mafana amidy am-piarovana Powder Powder Fototra Foundation Concealer Powder miaraka amin'ny kalitao avo lenta
Ny vovony mampitaha dia misy palette boribory mainty. Misy sponjy mahafinaritra ao anatiny.Ny vovony dia tsara, fahitsiana, fahazavana. Sady malama, akanjo ho an'ny karazana hoditra rehetra. Mora ny manafina pores na endrika hafa tsy misy fotony amin'ny alàlan'ny vovony pigment avo. Afaka manao fanamboarana malefaka sy voajanahary ianao. Miaraka amin'ny porofon'ny rano, ny porofon'ny hatsembohana, ny tarehin-tsolika solika, dia hiaro ny tavanao mamelombelona foana ny tavanao.Tarehin'aretin'ity vovoka mifanentana ity:High mpanome loko, tantera-drano, ny ela be, Fine vovoka, solika Control, Concealer, Full Fandrakofan'ny, tsiny, Matte, Multi Colors, Vegan, Organic, halozana Free, Non fandrisihana, Soft, tsy misy tsiny, Natural.
Banffee Billesale Powder Compact ho an'ny Makeup avy amin'ny orinasa Banffe
Ny vovony mampitaha dia misy palette boribory mainty. Misy sponjy mahafinaritra ao anatiny.Ny vovony dia tsara, fahitsiana, fahazavana. Sady malama, akanjo ho an'ny karazana hoditra rehetra. Mora ny manafina pores na endrika hafa tsy misy fotony amin'ny alàlan'ny vovony pigment avo. Afaka manao fanamboarana malefaka sy voajanahary ianao. Miaraka amin'ny porofon'ny rano, ny porofon'ny hatsembohana, ny tarehin-tsolika solika, dia hiaro ny tavanao mamelombelona foana ny tavanao.Tarehin'aretin'ity vovoka mifanentana ity:Ny pigment avo, ny ranon-drano, ny vovony maharitra, ny fifehezana solika, ny fandrakofana, ny fandrakofana, ny tsy misy dikany, ny loko, ny haizika, ny fombafomba, tsy mampidi-doza, tsy mampidi-doza
Banffle matihanina maharitra maharitra ny fanakorontanana vita amin'ny paositra ho an'ny vovoka tsindry
Ny vovoka no raketin'ny voalamina tsara ny manan-tsaina manodidina faritra, mainty hoditra. Izany dia azo atao tsara tarehy spaonjy ao anatiny.Ny vovoka ny tsara, thinness, kitoatoa. Izany silky mandrobo, fitoriana ho an'ny karazana hoditra rehetra. Mora ny manafina masonkoditra na hafa face tsiny amin'ny alalan'ny fampiasana ity mpanome loko ambony vovoka. Afaka manao fanamboarana malefaka sy voajanahary ianao. Amin'ny tantera-drano, hatsembohana porofo, tarehin-tsoratra solika fanaraha-maso, dia hitandrina ny tavanao mamelombelona indray andro maninjitra.Characters izany vovoka nanery voalamina tsara:High mpanome loko, tantera-drano, ny ela be, Fine vovoka, solika Control, Concealer, Full Fandrakofan'ny, tsiny, Matte, Multi Colors, Vegan, Organic, halozana Free, Non fandrisihana, Soft, tsy misy tsiny, Natural.
Banffe nanery ny vovony Foundation Foundation ho an'ny vovony sy ny tarehy
Banffle avo lenta OEM kalitao amin'ny vovobony tsara tarehy
Banffee Beegan Cruelty Compact vovoka mifangaro amin'ny endrika endrika endrika vovony sy ny pigments pigments
BANFICE 2021 Vaovao tsara indrindra am-bava tsara indrindra amin'ny santionany amin'ny stock santionany misy endrika fototra
Oem Makeup Powder Smooth Foundation Powder misy loko 3 miloko rano
BANFICED BANFE Cosmetic nanindry ny logo Powder Custom Logo Making LoBle Making Making Making Making CHINE avy any Sina
Banffee Natured Natureded Powder matte matte avo lenta pigcien endrika kosmetika madio
Banffe manana marika marika OEMDer OEMD OMM odm
Best nanery Powder Company - Banffee Makeup
Banffee Chealte Paody Paody tsy miankina
Ny vovoka avo sy ny vovo-drongony dia rakotry ny paleta mainty mainty. Misaraka amin'ny ampahany 2, avo lenta amin'ny lafiny ankavia sy contour amin'ny lafiny ankavanana.Ny vovony dia tsara, fahitsiana, fahazavana. Sady malama, akanjo ho an'ny karazana hoditra rehetra. Mora ny manafina pores na endrika hafa tsy misy fotony amin'ny alàlan'ny vovony pigment avo. Mora ny mamorona endrika 3D misy endrika, ampitomboina ny tavanao. Afaka manao fanamboarana malefaka sy voajanahary ianao. Miaraka amin'ny porofon'ny rano, ny porofon'ny hatsembohana, ny tarehin-tsolika solika, dia hiaro ny tavanao mamelombelona foana ny tavanao.Sarin'ity lisitra avo ity:High mpanome loko, tantera-drano, ny ela be, Fine vovoka, solika Control, Concealer, Full Fandrakofan'ny, tsiny, Matte, Multi Colors, ny tselatra, Vegan, Organic, halozana Free, Non fandrisihana, Soft, tsy misy tsiny, Natural.
Banffee 3 COVIES COST SUMMER NAMORANA POWDER POWDER POWDER FARANY FARANY FARANY VOLANA VONDRINDRA
Banffe Manaova ny marika matihanina matihanina matihanina MOQ MOQ CHENTEER PALETTE MAMPIASA
Banffe avo lenta amin'ny kalitao sy ny takelaka tsy miankina Powder ho an'ny fanamboarana vovony
Banffee Banmetic Control Set of the Conster Label Private Label nanindry ny Foundation Foundation
Banffee Cheams Powder miaraka amin'ny Palette Palette Makings
Banffle Organic organika Vegan mineraly nanindry ny vovony tsy misy fotony
tsy nanan-kitafy tantera-drano feno vovoka voalamina tsara mikasika oem makiazy faritra, voalamina tsara tarehy fototra vovoka
Banffee manana marika marika misy ny vovony-oem odm
C3817-818, Jiahua Plaza, Avenue Avenue,
Huaadu District, Guangzhou.
Fifandraisana mifandray amin'ny